शेर भण्डारी डडेल्धुरा, १० साउन
बन्द आँखाले सृष्टिलाई कस्तो देख्ला ? प्रश्न पेचिलो छ । आँखाको ज्योति हुनेका लागि यो प्रश्न नै होइन । जब ज्योति गुम्छ, २२ वर्षसम्म अर्काको सहारामा बाँच्नुपर्छ तब मात्र प्रश्न गम्भीर बन्छ, उत्तर फुर्दैन ।
२२ वर्षदेखि आँखाको ज्योति गुमाएर बाँचेका केशवराज पन्तलाई पढौं ।
डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका–५ का नरेन्द्र पन्त २०५३ सालमा जन्मिए, आँखाको ज्योति नलिई ।
‘संसार कस्तो छ ?’ साथीभाइलाई कहिलेकाहीँ फ्याट्ट सोध्छन् नरेन्द्र ।
‘अरुभन्दा पनि जन्म दिने आमा बुबालाई हेर्ने ठूलो रहर छ,’ पन्तले मनमा लागेको कुरा खोले । तर उनको धोको कल्पनामै सीमित छ ।
उपचारमै सकियो सम्पत्ति
जन्मिएको एक वर्षपछि छोराले आँखा देख्दैन भन्ने थाहा पाए बुबाआमाले ।
‘छोरो ठूलो हुँदै गयो,’ बुबा केशवराज पन्त भन्छन्, ‘अलि अलि बोल्ने भएदेखि बुबा म किन आँखा देख्दिनँ, म हजुुरलाई हेर्न चाहन्छु तर पनि किन देख्दिनँ भन्दै रुन थाल्यो ।’
छोराले आँखा देखिहाल्छ कि भनेर बुबाले पैसाको जोहो गरे उपचारका लागि । तर, सम्पत्ति सिद्धियो, नरेन्द्रले आँखा देखेनन् ।
विद्यालयले भर्ना गरेन
आँखा नदेखे पनि छोरालाई विद्यालय पठाउँथे केशवराज ।
‘तर विद्यालय जानु परे मर्छु भन्न थाल्यो छोराले,’ पन्त सम्झन्छन्, ‘बुझ्दै जाँदा स्कुलले भन्यो– आँखा देख्दैन, कसरी पढ्छ ? भो भर्ना नगर्नुहोस् ।’
विभिन्न स्कुलमा दौडधुप गरेपछि डडेल्धुराको जोगबुढास्थित सिद्धनाथ उच्च माविमा १० वर्षको उमेरमा नरेन्द्र भर्ना भए ।
‘सामुदायिक विद्यालयमा सबैले भर्ना गर्न पाउनुपर्ने हो तर छोराले किन पाएन ?’ केशवराजले शिलापत्रकर्मीलाई सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म यो प्रश्न लगिदिन आग्रह गरे ।
बिस्तारै पलायो खुसी
कुनै बेला भर्ना लिन नमान्ने विद्यालयले नै आजभोलि नरेन्द्रलाई चासो दिन थालेको छ किनकि संसार नदेखे पनि उनले स्वरको जादुले सबैको मन जिते । नरेन्द्रको कला देखेर विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीले पनि नरेन्द्रलाई माया गर्न थाले ।
पढाइमा पनि अव्बल छन् नरेन्द्र । अहिले डडेल्धुरा बहुमुखी क्याम्पसमा बीएड प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छन् । छोरालाई माथिल्लो तहसम्म पढाउन चाहन्छन् उनका केशवराज । ‘तर, सबै सम्पत्ति उपचारमा सकें, अब कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता छ,’ केशवराज भन्छन् ।
सुरुसुरुमा विद्यालय जाँदा साथीहरूले अनौठो मानेर कुरा गरे पनि अहिले साथीहरूले निकै सहयोग गरेको अनुभव छ नरेन्द्रसँग ।
‘समाजमा अपांगता भएकालाई चिन्ने कमै हुँदा रहेछन् । सार्वजनिक ठाउँमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई केहीले सहानुभूति देखाउने गरे पनि धेरैले महत्त्व दिँदैनन्,’ नरेन्द्रको अनुभव यस्तो रहेछ ।
सार्वजनिक ठाउँमा बस्दा या बाटोमा हिँड्दा फरक क्षमता भएकै कारण दुःख खेपेको अनुभव छ उनीसँग ।
गीत गाउने धोको
स्वर मीठो छ नरेन्द्रको । गीत गाउँछन् । उनी जगतलाई स्वर सुनाउन चाहन्छन् । तर, रेकर्ड गर्न पैसा छैन उनीसँग ।
उनी आफैंले बुबामा समर्पित गीत लेखेका छन् ।
‘यो गीतलाई रेकर्डिङ गरेर सबैलाई सुनाउन मन छ तर पैसा छैन । कसैले सहयोग गरे भने म यो गीत बजारमा ल्याउँछु,’ नरेन्द्र भन्छन् ।
मीठो स्वर भएका नरेन्द्रलाई आजसम्म कसैले म सहयोग गर्छु भनेका छैनन् । तर, आस भने मरिसकेको छैन उनको ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ११, २०७६, ००:३०:००
भिसा र करार बाँकी रहेकालाई वैदेशिक रोजगारमा जाने दिने सरकारको निर्णय
सशस्त्रको बीओपी टोलीद्वारा तिङ्कर भन्ज्याङ जाने बाटो मर्मत
दुर्गेश थापाको तीजगीत 'बीचबीचमा २' सार्वजनिक